Konke mayelana Nokuphrinta kwe-3D - I-Hardware Yamahhala | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala ( Ikhasi 2 )
Ultimate Guide to 3D Printers
Uma usanda kuthenga eyodwa, noma uma uhlela ukwenza kanjalo, nansi inkomba yokufunda mayelana namaphrinta e-3D
Isibukeli se-DWG: izibukeli zamahhala ezihamba phambili
Amafayela e-DWG ayifomethi yomdwebo wekhompyutha esetshenziswa isofthiwe efana ne-AutoCAD, kodwa enye isofthiwe yesibukeli se-DWG ikhona.
I-Kame Robot: irobhothi eliphrintekayo
I-Kame Robot yaklanywa i-BQ ukuze ifunde ngamarobhothi ngendlela elula neshibhile. Ngaphezu kwalokho, ingakhiqizwa ekhaya, ngephrinta ye-3D
Vula i-Dynamic Robot Initiative: Umthombo ovulekile we-Boston Dynamics Spot
Iphrojekthi ye-Open Dynamic Robot Initiative ihlose ukuletha inja yerobhothi efana naleyo evela eBoston Dynamics, kodwa umthombo ovulekile futhi ophrintekayo.
Izinhlobo zokuphrinta kwe-3D: konke odinga ukukwazi mayelana nale nqubo
Uma uthanda inqubo yokuphrinta enezinhlangothi ezintathu, lapho-ke uzothanda ukwazi ngezinhlobo zokuphrinta kwe-3D ezikhona
ILithophany icishe ibe ubuciko obunabalandeli nabenzi abaningi ngokwengeziwe abenza ukudala kwabo besebenzisa ukuphrinta kwe-3D
Ukukhiqiza okungeziwe: konke odinga ukukwazi mayelana nale nqubo
Lapha ungafunda konke odinga ukukwazi mayelana nokukhiqiza okungeziwe, inqubo yokwenziwa kwezakhi.
Lezi yizinhlelo ezinhle kakhulu zokuphrinta ze-3D ongazisebenzisela amaphrojekthi akho ukwakha konke ongakucabanga
Konke odinga ukukwazi ngamasu wokuklama we-CAD kanye nezinhlelo ezinhle kakhulu zesoftware
I-DXF: okufanele ukwazi ngale fomethi yefayela
I-DXF yifomethi yefayela engazwakala ijwayelekile kuwe noma mhlawumbe iyenzeka, kepha kufanele wazi ngayo, ngoba iyathakazelisa impela
Setha isikulufa: kuyini kanye nezicelo
Konke odinga ukukwazi ngesikulufa sokusetha, izinhlobo zezikulufo, nomehluko phakathi kwesikulufa nebhawodi kule ndatshana
I-Anycubic i3 Mega: iphrinta yekhwalithi ye-3D engaphansi kwe- € 300
I-Anycubic i3 Mega, iphrinta ephezulu ye-3D enentengo engaphansi kuka- € 300. Okwenza kube ngenye yezinto ezihamba phambili kuleyo ngxenye yemakethe
Amaphrojekthi wamahhala we-Hardware we-5 esingakha ngezicucu zeLego
I-athikili emayelana namaphrojekthi athandwa kakhulu angakhiwa ngezicucu zeLego nange-Free Hardware, amaphrojekthi athengekayo kwabaningi futhi kulula ukwenza ...
I-Tresdpro R1, iphrinta yobungcweti enemvelaphi yaseSpain
Ambalwa amaphrinta e-3D akhiqizwa eSpain njengeTresdpro R1, iphrinta esezingeni eliphakeme enikezela ngemisebenzi emihle nezici nosayizi ofana nephrinta yedeskithophu, yize kungenziwa ngeTresdpro R1 ...
IPorsche, ngemuva kokwenza izivivinyo eziningi zekhwalithi, isanda kumemezela ukuthi uphiko lwayo lwePorsche Classic luzosebenzisa ubuchwepheshe obuhlukile bokuphrinta be-3D ukwenza izingxenye ezizobuyisa noma yikuphi okudala komkhiqizo waseJalimane.
Impela uma ungumthandi wokuqina noma uma uthanda nje ezemidlalo futhi ujwayele ukujwayela njalo, ...
I-Branch Technology inkampani ekhethekile ekwakheni izindlu ngokunyathelisa kwe-3D okuvele ikwazile ukudala isizukulwane esisha semishayo nezindonga ezihhafu ezinezici ezithakazelisa kakhulu.
IStratasys, iDassault Systèmes ne-Easton Lachappelle zisitshela nge-Unlimited Tomorrow, okuyisinyathelo esifuna ukuthuthukisa nokwakha isizukulwane esisha samaphrinti we-3D aphrintiwe athakazelisa kakhulu ngokubuka kokusebenza kanye nokubonga okukhangayo ngamathuba wabo wokwenza ngokwezifiso.
I-United Kingdom itshale ama-euro ayizigidi ezingama-25 esikhungweni sokuthuthukisa ubuchwepheshe obusha bokuhlinza
I-United Kingdom, ngeNational Institute for Health Research, isanda kuvula isikhungo esisha sokucwaninga ngobuchwepheshe obusha bokuhlinza lapho kutshalwe khona imali engaphansi kwezigidi ezingama-25.
I-PP ifuna ukukhuthaza ukuphrintwa kwe-3D kokufakelwa ngokufaka onjiniyela emaqenjini amanje okunakekelwa kwezempilo
Ukungena lapho sizokhuluma khona ngesiphakamiso esingewona umthetho esethulwe yi-PP eCongress of Deputies ukukhuthaza imishini yezokwelapha lapho kukhona onjiniyela abaqeqeshiwe ekuphrintweni kwe-3D.
I-HP isitshela ngemibala yayo emisha yamaphrinta e-3D
I-HP ikhuluma nathi ngohlobo lwayo olusha lwamaphrinta e-3D akwazi ukuphrinta ngombala ogcwele. Sikhuluma ngeJet Fusion 300 neJet Fusion 500.
UHoon Lee, umcwaningi onedumela elihle, usitshela ngomsebenzi owenziwe yithimba lakhe nalapho bekwazile khona ukwakha umqondo omusha wokuphrinta we-4D.
IPetronor ithembele ekuphrintweni kwe-3D ukwenza izingxenye ezingasetshenziswa zamaphampu ayo wamanzi
Ngenxa yohlelo olufuna umfelandawonye wezinkampani zendawo ezinamazwe amaningi amakhulu, uPetronor ukwazile ukuthola i-Addimen ukuthi yenze izingxenye zamaphampu abo amanzi ngokunyathelisa nge-3D.
I-EPFL isivele isebenza ukuthuthukiswa kokuphrinta kwe-endoscopic 3D
Ithimba labaphenyi abavela e-École Polytechnique Fédérale de Lausanne likwazile ukuthatha izinyathelo ezibalulekile ekuthuthukiseni nasekucwaningeni lokho okwaziwa ngokuthi yi-endoscopic 3D printing.
I-Apple ingaqala iphrinta ye-3D kulo nyaka we-2018
Ukungena lapho sizokhuluma khona ngamalungelo obunikazi amasha i-Apple esanda kuwabhalisa, amalungelo obunikazi angama-44 lapho sithola eyodwa ihlobene nokuthi kungenzeka ukuthi i-Apple izenzele iphrinta yayo yombala ye-3D.
I-HP ifinyelela esivumelwaneni sokubambisana ne-CEA esizosiza ukuphrinta kwe-3D kwezimboni
I-HP isanda kumemezela isivumelwano esisha sokubambisana ne-CEA sokuthatha elinye igxathu phambili emzameni wayo wokunikeza ubuchwepheshe obungcono kuwo wonke amakhasimende ayo emhlabeni wokunyathelisa kwe-3D kwezimboni.
E-China kuyacaca ukuthi sonke sizophrinta izingubo zethu ekhaya
E-China kubonakala sengathi kuya ngokuya kucace ukuthi ubuchwepheshe obufana nokuphrinta kwe-3D buzolokhu buhleli. Obunye ubufakazi ngukuthi banethemba lokuthi ngokuhamba kwesikhathi wonke umuntu uzenzela izingubo zakhe ekhaya.
Ukubheja kweNavantia ekuphrinteni kwe-3D kokwakhiwa kwemikhumbi
INavantia isanda kukhipha incwadi yabezindaba ememezela ukufakwa kobuchwepheshe bokuphrinta be-3D ezinqubweni zayo zokukhiqiza nokwakhiwa kwemikhumbi ngaphakathi kwendawo yemikhumbi yenkampani ePuerto Real, eCádiz.
I-Desktop Metal patent ubuchwepheshe obusha bokwakha izisekelo ezingahlukaniseka
IDesktop Metal isanda kwethula ubuchwepheshe obusha lapho noma yimuphi umsebenzisi angakha izingxenye zensimbi eziyinkimbinkimbi ngokunyathelisa nge-3D, aqede zonke izesekeli ezidingekayo kamuva ngezandla zakhe.
I-Utah ihlomisa ama-SWAT ayo ngamaphrinta we-3D
Ngaphambi kokuthi ngiqale ngokuningiliziwe ngalezi zindaba, ngithanda ukuma isikhashana ukuqonda ukuthi yini ...
Ngenxa yokuphrinta kwe-3D, inkumbulo yama-chips aguquguqukayo inyuswe kakhulu
Yize kungavamisile ukuthi kuvame kakhulu emakethe enkulu, iqiniso ukuthi ...
Kwambio Ceramo One, iphrinta ye-ceramic 3D
Inkampani yaseMelika iKambio isitshela ngesethulo sayo sakamuva esihle kakhulu, iCeramo One, iphrinta ye-ceramic 3D yokusetshenziswa ngobungcweti inkampani ethembisa ukunciphisa kakhulu izindleko zokukhiqiza.
INexa3D ikhombisa iphrinta yayo eshesha kakhulu ye-3D
Ukungena lapho sizokhuluma khona ngeNexa3D, inkampani esanda kwethula umphakathi iphrinta yayo entsha ye-SLA emphakathini, imodeli abayichaze ngokushesha njenge- 'super fast'.
IBugatti izoqala ukukhiqiza izigaxa zamabhuleki ezimoto zayo isebenzisa ukuphrinta kwe-3D
IBugatti isanda kumemezela ngokusemthethweni ukuthi onjiniyela bayo sebethuthukise indlela kanye nobuchwepheshe obudingekayo ukuze baqale ukukhiqiza amakhabethe we-titanium brake for supercars zabo besebenzisa ukuphrinta kwe-3D.
Izesekeli zeselula ezenziwe ukubonga kokuphrinta kwe-3D esivumelwaneni esisha phakathi kwe-Incase neCarbon3D
I-Incase isanda kufinyelela esivumelwaneni neCarbon3D lapho izuza khona ngokusetshenziswa kobuchwepheshe bayo bokuphrinta be-3D, into ezoyivumela ukuthi ikhiqize izesekeli zamaselula ezinomklamo okhangayo futhi oqinile, ikakhulukazi ezimweni zamacala.
Olli, indlela yezokuthutha lapho abakwaLocal Motors beqoqe ngayo izigidi zamadola
I-Local Motors yinkampani ezinze e-United States esike yaba sematheni ngenxa yokuthola imali etshalwe ezigidini zamarandi ukuze iqhubeke nokwakha i-Olli, imoto ezimele eyenziwa ngokunyathelisa kwe-3D.
I-Starbucks iphendukela ekuphrinteni kwe-3D ukuhlobisa isitolo sayo esisha sekhofi saseShanghai
I-Starbucks iyasimangaza ngokuvulwa kwendawo yokudlela entsha eShanghai, indawo engaphezu kwamamitha-skwele angu-2.500 400 nabasebenzi abangama-3 okuzokumangaza ngenxa yokusebenzisa kahle ubuchwepheshe obunjalo obumnandi ekwakhiweni kwayo njengokuphrinta kwe-XNUMXD noma ukusetshenziswa kokungeziwe ngokoqobo.
ICarbon ithola u- $ 200 million ukuletha ubuchwepheshe bayo kubakhiqizi abaningi
ICarbon isanda kumemezela ukuvalwa komjikelezo omusha wezezimali abanethemba lokuthi bazoqhubeka nokwenza ubuchwepheshe babo obuthokozisayo bokukhiqiza izicathulo ngokunyathelisa nge-3D, ngaleso sikhathi okwakhanga ngayo i-Adidas futhi manje asebekhuphule ngayo izigidi ezingama-200 zamadola.
I-ArcelorMittal izothola isikhungo sayo esisha sokunyathelisa i-3D e-Avilés
Ngokusobala i-ArcelorMittal yamazwe omhlaba ayibanga nenkinga enkulu yokuthola indawo ekahle yesikhungo sayo esisha esenzelwe ...
I-PLA 3D850 ne-3D870 evela kumkhiqizi waseSpain uSakata3D angabhekana nenqubo ye-crystallization esebenzisa i-ovini ejwayelekile esithuthukisa ngayo kakhulu izici zemishini yalolo daba.
Ziningi izinkampani zokuklama ezibona ekuphrinteni kwe-3D lobo buchwepheshe obungabasiza futhi okuningi ku ...
Iphrinta ye-Omni3D 3D isiyatholakala eSpain ngenxa ye-INTECH3D
Emakethe yokuphrinta ye-3D kunamamodeli amaningi kakhulu okuthi, ngandlela thile, asikwazi ukuthola ...
I-General Electric yokwenza injini yokuqala ye-3D ephrintiwe ye-turboprop
IGeneral Electric isebenza ekwakhiweni kwenjini ye-turboprop ezohlanganisa izingxenye ezenziwe ngokusebenzisa ubuchwepheshe obuhlukile bokuphrinta be-3D.
IGeneral Electric isivele ilawula ngaphezu kuka-90% wamasheya ka-Arcam
Ngemuva konyaka uGeneral Electric elawula ikusasa le-Arcam, amandla ayo enkampanini akhule emasontweni adlule aya kuma-95% wabanikazi bamasheya.
I-X-Plorer, i-reactor eyenziwe ngezingxenye eziphrintiwe ezingama-965 3D
Iqembu labafundi bezobunjiniyela likwazile ukwenza i-reactor, eyabhabhadiswa njenge-X-Plorer, enezingxenye ezingama-965 ezenziwe ngokunyathelisa kwe-3D.
Ngenxa yentambo entsha yeColorFABB neLehvoss okudaliwe kwakho ngeke kuhlupheke ngenxa yokukhubazeka
IColorFABB neLehvoss, izinkampani ezimbili ezinkulu zaseYurophu ezihlobene nokuphrinta kwe-3D, ziveza intambo yazo entsha ekwaziyo ukunciphisa izinkinga ezixegayo.
ICarbon 3D ithola u- $ 200 million ukwenza ngcono izinqubo zayo zokukhiqiza izicathulo
ICarbon 3D isanda kuthola utshalomali lwama-dollar ayizigidi ezingama-200 ukwenza ngcono izinqubo zokukhiqiza zezicathulo zezemidlalo ze-Adidas.
EJalimane sezivele zakha i-marzipan ngokunyathelisa kwe-3D
INiederegger, enye yezinkampani ezaziwa kakhulu ekwenziweni kwemarzipan, iqala ukusebenzisa amaphrinta e-3D ekukhiqizeni kwayo.
Ukuphrinta kwe-4D, inguquko enkulu elandelayo ekukhiqizeni okufakiwe
Baningi abacwaningi ngisho nezinkampani eziqonde izinzuzo ezinkulu ukuphrinta ezingakunikeza ...
I-Lion 2, isiphakamiso esisha sokuphrinta kwe-3D kusuka ku-LEON3D
I-LEON3D imemezela ukufika emakethe yeLion 2 entsha, iphrinta ye-3D enentshisekelo yobuchwepheshe obukhethekile ezothengiswa kuphela nguLoyoy Merlin.
IGreen Ship izohlomisa imikhumbi yayo ngabaphrinta be-3D
IGreen Ship isanda kumemezela isinqumo sayo sokuhlomisa imikhumbi yayo ngabaphrinta be-3D ukuthi bakwazi ukwenza izingxenye zomkhumbi uqobo.
Benza ikyubhu enkulu kunazo zonke emhlabeni kaRubik ngenxa yokuphrinta kwe-3D
UGrégoire Pfenning ungumklami nomkhiqizi walokho okubizwa ngokuthi yicube likaRubik elikhulu kunawo wonke ake adalwa ngumuntu.
I-GE Additive isibonisa uhlobo oluphambili kakhulu lwephrinta ye-3D
I-GE Additive isanda kukhipha imiphumela yephrojekthi yayo, ayikho ngaphansi kwephrinta ye-3D ekwazi ukuguqula umhlaba wokukhiqiza okungeziwe.
I-Airbus ne-Arconic bazosebenzisana ekuthuthukiseni ukuphrinta kwe-3D emkhakheni we-aerospace
I-Airbus ne-Arconic basanda kumemezela ngokuhlanganyela ukuthi bafinyelele esivumelwaneni sokusebenza ekuthuthukiseni ukuphrinta kwensimbi kwe-3D kwezindiza.
I-PP ifuna ukuhlinzeka zonke izibhedlela ngomnyango wazo wokuphrinta we-3D
I-PP iphakamisa kwiCongress of Deputies ukuthi yakhe umthetho ukuze zonke izibhedlela zaseSpain zibe nomnyango wazo wokuphrinta we-3D.
I-FabRx ilokotha ukukhiqiza imithi ephrintiwe yezingane
Kunobuchwepheshe obuningi esibaziyo namuhla lapho izinkampani ezahlukahlukene ziqala ukunikeza ithuba lokudala ...
IConcept Laser iqala ukwakhiwa kwesikhungo sayo se-3D
Ngemuva kokulinda isikhathi eside inkampani yaseJalimane iConcept Laser ekugcineni isiqalile ukwakha i-3D Campus yayo entsha.
I-BioMimics, ukuzibophezela okusha kukaStratasys emkhakheni wezokwelapha
I-BioMimics iyinkundla yamamodeli wezokwelapha adalwe yiStratasys lapho angaqeqesha khona, enze ukuhlinza ... zonke izinhlobo zabasebenzi bezokwelapha.
UDaimler uqala ukukhiqiza izingxenye zamaloli ngokuphrinta kwe-3D
UDaimler, njengezinye izinkampani eziningi ezihlobene nomhlaba wezokuthuthwa kwempahla, njengeRenault, une ...
I-RIC idala ukuhlukaniswa okusha okunikezelwe ekuphrintweni kwe-3D
IReprografía Industrial de Cataluña, i-RIC, isanda kumemezela ukwakhiwa kwesigaba esisha ngaphakathi kwenkampani esetshenziselwe ukuphrinta kwe-3D.
I-MIT ithuthukisa ubuchwepheshe obenza iphrinta yakho ye-3D iphindwe kashumi
I-MIT isanda kushicilela iphepha elichaza ubuchwepheshe obusha obukwazi ukukhulisa ijubane lokuphrinta le-10D ngo-3.
Sihlaziya imicu exotic kakhulu ye-Smart materials 3D
Sizohlaziya imicu ye-Smartfil BOUN, GLACE, PLA 3D850 ne-EP futhi sizochaza ngokuningiliziwe yonke imininingwane yokusebenzisa kwabo.
I-CPWC, ubuchwepheshe obuzokuvumela ukuthi uphrinte nge-3D ngejubane eliphakeme
I-CPWC ubuchwepheshe obusha obakhiwe yinkampani yase-Ukraine i-Spry Build okuhloswe ngayo ukwenza ngcono ijubane lamaphrinta e-3D wohlobo lwe-DLP.
Ukuhlolwa kweVirginia Tech kwenza ukuthi kube lula ukuphrinta kwe-3D iKapton
Iqembu labacwaningi abavela eVirginia Tech likwazile ukusungula indlela yokusebenza yokuphrinta i-3D okokusebenza okufana neKapton.
I-Hoversurf Formula, imoto endizayo ezimele ekhiqizwa ukuphrinta kwe-3D
Ziningi izinkampani abazibonayo emhlabeni wezimoto nekusasa lazo lesikhashana, okubonakala ngathi ...
I-LLNL yenza insimbi ephrintiwe ibe namandla aphindwe kathathu kunensimbi yendabuko
Abaphenyi e-Lawrence Livermore National Laboratory baphumelele ekwakheni insimbi ephrintiwe enamandla futhi enamandla kakhulu.
ISicnova izoqala ukukhiqiza amaphrinta weXYZprinting
U-Grupo Sicnova usanda kushicilela ukukhishwa kwabezindaba okukhuluma ngesivumelwano sokusebenzisana esifinyelelwe ne-XYZprinting sokwenza amaphrinta e-3D.
Unentshisekelo ekuphrinteni kwe-3D? Lezi zifundo zamahhala ze-Autodesk zingakusiza
I-LinkedIn imemezela ukukhishwa kochungechunge lwezinsuku ezingama-90 zezifundo zamahhala ze-Autodesk ezilungiselelwe ukuphrinta kwe-3D.
Kubandakanya ukuphrinta kwe-3D ngaphakathi kohlelo lwedijithali oluphakanyiswe nguHulumeni waseSpain
UHulumeni waseSpain usanda kumemezela uhlelo olusha lwedijithali lokuvuselela nokwenza isimanjemanje inethiwekhi yebhizinisi laseSpain.
I-Sabic iveza intambo entsha yokuphrinta kwe-3D
Inkampani yamakhemikhali edumile iSabic isanda kwethula intambo entsha yokuphrinta kwe-3D evelele izici zayo zezimboni.
Ukunqoba kokuphrinta kwe-3D phakathi kwabantu abasha eNdiya
Ukuphrinta kwe-3D kuya ngokuya kudume kakhulu kubantu abasha eNdiya, kuze kube sezingeni lokuthi abafundi bazenzele amaphrinta abo e-3D ...
IGeneral Electric Additive, engaphansi kwenkampani yamandla amakhulu iGeneral Electric, isanda kumemezela ukuthengwa komkhiqizi wesoftware waseBelgium uGeonX.
I-Endesa Foundation isanda kwenza ngokusemthethweni ukuthi izikhungo zemfundo ezingama-40 eMadrid zizothola amaphrinta e-3D ukufundisa abafundi bawo.
Ungayenza kanjani iphrinta yakho ye-3D ngokushesha okukhulu ngaphandle kokulahlekelwa ikhwalithi yokuphrinta
Iqembu lonjiniyela likwazile ukwenza i-firmware ekwazi ukukhuphula isivinini sokusebenza sephrinta yakho ye-3D ngaphandle kokulahlekelwa ikhwalithi yokuphrinta.
I-HP Jet Fusion 3D 4210, imodeli entsha yephrinta ye-3D ingena emakethe
Ukungena lapho sizokhuluma khona nge-HP Jet Fusion 3D 4210 entsha, umshini ofinyelela emakethe osetshenziselwe ukusetshenziswa ngobuchwepheshe.
MOOZ, iphrinta ye-3D enekhono lokuqopha nokusika izinkuni
I-MOOZ iphrojekthi efuna uxhaso ngeKickstarter, lapho kunqunywe khona ukudala iphrinta ye-3D ekwazi ukuqopha nokusika izinkuni.
Sihlaziye i-PLA CARBON evela ku-FFFWORLD, intambo engu-10
I-PLA CARBON eyenziwe ngu-FFFWORD iyintambo ye-carbon fiber. Iphesenti lezintambo ze-carbon fiber selifakiwe enqubeni yokukhiqiza
IPlumen iveza ikhathalogi yayo yezibani eziphrintiwe ze-3D
Inkampani yaseNgilandi iPlumen iyizindaba ezibonga ukwethulwa kwamalambu ayo amasha akhiqizwa kusetshenziswa ubuchwepheshe be-3D bokuphrinta.
Ososayensi base-Australia bayakwazi ukwenza indlela entsha yokuphrinta kokhonkolo kwe-3D
Elinye lamaphuzu amahle asabonakala ukuthi alindile ekuphrintweni kwe-3D yikho kanye lokhu ...
IKinazo e1, ibhayisikili elinyathelisiwe le-3D
Ngenxa yokusebenzisana kweKinazo neVolkswagen Group, namhlanje singakhuluma nge-e-bike eheha futhi ekhangayo njenge-e1.
UPorsche uthenga ingxenye yamasheya akwaMarkforged
Ngokungabikho kwesitatimende esisemthethweni esivela kwaMarkforged, iPorsche isanda kungena ekunikezelweni kwamasheya kwesikhulu senkampani yaseNyakatho Melika.
AbakwaRenault bakwazile ukunciphisa isisindo sezinjini zayo ngenxa yokuphrinta kwe-3D
AbakwaRenault baqala ukukhishwa emaphephandabeni bememezela izinzuzo zokusebenzisa izinhlelo zayo zokunyathelisa i-metal 3D ekwakheni izinjini.
Manje kungenzeka ukudala ama-corneas aphrintiwe e-3D kusuka esikalini senhlanzi
Ithimba labaphenyi abavela eMassey University bathi bayakwazi ukwenza ama-corneas ngokunyathelisa nge-3D esikalini senhlanzi iHoki.
I-Air Liquide idala ophendulayo oprintiwe we-3D wokukhiqiza i-hydrogen
I-Air Liquide iyasimangaza ngokwethulwa kwesiphenduli esithile sokukhiqiza i-hydrogen esenziwe ngokuphelele ngokunyathelisa kwe-3D.
Ngenxa yaleli bhodi le-Arduino, wonke ama-neuron asebuchosheni besibungu akwenzile ukwenziwa
Ithimba lososayensi, ngenxa yokusetshenziswa kwebhodi le-Arduino, likwazile ukulingisa ukusebenza kobuchopho bezibungu.
ICubibot, iphrinta yohlobo lwe-FDM ye-3D engaba ngeyakho ngaphansi kwama-euro angama-250
ICubibot yiphrinta yohlobo lwe-3D ye-FDM ongayisebenzisa kunoma iyiphi imvelo yasekhaya futhi manje ingaba eyakho ngo- $ 299 kanye nokuthumela.
UTumaker uthola cishe ama-euro angama-40.000 wezezimali ukwakha iphrinta yakhe entsha ye-3D
Ukungena lapho sizokhuluma ngokwamukelwa okuhle ukuthi imodeli entsha yephrinta ye-3D efana neTumaker Voladd eye yaba nayo emakethe.
I-FitStation, ipulatifomu entsha ye-HP yokwakha izicathulo ngokwezifiso
I-HP inikeza iFitStation, ipulatifomu ephelele yokwakha izicathulo ngokuphrinta kwe-3D okwenziwe ngokuphelele kumsebenzisi ngamunye.
Izinto zokwakha zithenga i-ACTech ngama-euro ayizigidi ezingama-36,6
Omunye wemikhakha ohlobene nokuphrinta kwe-3D okhula kakhulu ezinyangeni ezedlule, awunandawo ...
IStratasys PolyJet Agilus30, into efana nenjoloba
IStratasys PolyJet Agilus30, into ezokuvumela ukuthi udale noma iluphi uhlobo lwento enezinto ezifana nezenjoloba.
URenishaw RenAM 500Q, iphrinta entsha ye-3D enama-lasers amane
I-Renishaw RenAM 500Q, iphrinta entsha ye-laser 3D ongandisa ngayo umkhiqizo wakho ngenxa yokusebenzisa amakhanda amane.
Ukuphrinta kwe-XYZ kusitshela ngephrinta yabo entsha ye-3D
UFernando Hernández, oyi-CEO yamanje yeXYZPrinting, usanda kumemezela ukuthi inkampani isilungele ukwethula iphrinta entsha ye-3D.
I-Printabrick, isisombululo socezu lwe-Lego olulahlekile
I-Printabrick iyindawo yokugcina yamahhala yezingxenye namakhithi weLego esingazilanda siphrinte kuphrinta yethu ye-3D ngamaphrojekthi wamahhala noma njengethoyizi
Iphrinta enkulu kakhulu ye-3D eYurophu izokwenziwa eVigo
IFabLab yeVigo izophatha ukwenza iphrojekthi efuna ukwakha iphrinta enkulu kunazo zonke ze-3D eYurophu.
Ukuphrinta kwe-3D kuzoba imbangela yokulahleka kwe-25% yokuhweba emhlabeni
Ukuphrinta kwe-3D kungaba imbangela yoshintsho olukhulu kakhulu ukuhweba komhlaba obekungaba khona emashumini eminyaka amuva nje.
I-NASA ukusebenzisa ukuphrinta kwe-3D ukwenza izinjini zerokhethi
I-NASA isanda kumemezela ukwenziwa kwendlela entsha ezosebenza ngayo ekuphrinteni kwe-3D ngezinto ezimbili ezahlukahlukene.
IMakerbot Labs, inketho entsha yonjiniyela futhi inelukuluku lokuphrinta kwe-3D
Inkampani kaMenzibot iyaqhubeka nokubheja kwezemfundo nocwaningo, manje isisungule iMakerbot Labs, indawo lapho unjiniyela angacwaninga ngayo ...
Sebenza ngesikhumba esiphrintiwe bio sibonga uZoa, into entsha eyenziwe yi-Modern Meadow
I-Modern Meadow yinkampani yaseMelika esanda kuba sematheni ngenxa yokwethulwa kwesikhumba sayo esisha esenziwe yi-3D bioprinting.
Ukuhlaziywa kwe-XYZprinting Da Vinci 3D Pen, ipeni lokudweba ku-3D
Sichaza ukuthi izibaya ze-3D zisebenza kanjani futhi sizohlaziya ngokuningiliziwe i-XYZprinting Da Vinci 3D Pen ukuphrinta izibalo ze-3D. Kubaluleke?
ICazza Construction isibonisa irobhothi layo elikwaziyo ukwakha kabusha izindlu
Ubuchwepheshe obuyinoveli njengokuphrinta kwe-3D kubonakala buya buthola kancane kancane ngenxa ...
I-Imprimo iveza iphrinta yayo entsha enkulu ye-3D
I-Imprimo isanda kwethula iphrinta yayo entsha enkulu ye-3D, evelele izici zayo nentengo ephansi.
Nakhu ukuthi iphrinta entsha ye-Natual Robotics 3D ibukeka kanjani
I-Natual Robotic ibuyile futhi kulokhu ukwethula emphakathini akukho ngaphansi komunye wamaphrinta ...
I-Adidas izoqala ukukhiqiza uchungechunge olunqunyelwe lwezicathulo zayo ngokunyathelisa kwe-3D
I-Adidas isanda kwenza ngokusemthethweni ukwethulwa kwemodeli entsha yezicathulo zebhasikidi ezokhiqizwa ukuphrinta kwe-3D.
I-Apis Cor ithola ama-euro ayizigidi ezingama-6 ukuqhubeka nokwakha izindlu zokuphrinta kwe-3D
I-Apis Cor yinkampani ekhona ngemuva kokwakhiwa kwephrinta ye-3D ekwazi ukukhiqiza izindlu eziphelele ngamahora angama-24 kuphela.
Hlangana neKappa, iphrinta yokuqala ye-3D enomshini oqondile
IKappa yiphrojekthi entsha yokuphrinta ye-3D esafuna ukuxhaswa ngemali ngewebhusayithi eyaziwayo yeKickstarter ukuze ikwazi ukufinyelela emakethe.
I-Airbus ifaka, okokuqala ngqa, ingxenye eyenziwe ukuphrinta kwe-3D endizeni yezentengiselwano
I-Airbus isanda kumemezela ukuthi bakwazile ukuthuthukisa ubuchwepheshe obudingekayo bokwenza izingxenye zensimbi ngokunyathelisa kwe-3D ezindizeni zabo.
I-3DLAC isibonisa i-vaporizer yayo entsha yokulungiswa kokuphrinta kwe-3D
I-3DLAC imemezela ukwethulwa kwesifutho esisha sokulungisa ukuphrinta kwe-3D, umkhiqizo okuthi, ngokungafani nowangaphambilini, manje usungowemvelo.
I-BCN3D yethula iphrinta yayo entsha ye-3D
I-BCN3D ibuyile futhi kulokhu izosimangaza ngokwethulwa kwephrinta yayo entsha nehehayo ye-3D, imodeli egama linguSigmax.
IPrusa ivuselela i3 yayo ngobuchwepheshe obuphambili obutholakala emakethe
Ngemuva kokulinda isikhathi eside, inkampani yakwaPrusa ekugcineni isimemezele ukwethulwa kwenguqulo entsha ye-i3 eyaziwayo.
I-Ultimaker izogxila ekuthuthukisweni kwesoftware yokuphrinta kwe-3D
I-Ultimaker isanda kumemezela ukuthi, ngaphezu kokuthuthukiswa kwamaphrinta amasha e-3D, inkampani izoqala ukuthuthukisa isoftware yayo yokuphrinta ye-3D.
Funda ukusebenza nokuphrinta kwe-3D ngendlela elula ngenxa ye-DIBUPRINT 3D
Funda ukudala imiklamo futhi usebenze ngokugeleza kokuphrinta kwe-3D ngenxa yesoftware elula futhi enembile njenge-DIBUPRINT 3D.
Lesi sithombe sakhiwe ngezitini eziphrintiwe eziyi-2.000 3 ze-XNUMXD
Ukungena lapho sizokhuluma khona ngesithombe esithandekayo esenziwe eHong Kong yiqembu lonjiniyela abavela kwizitini eziphrintiwe ze-3D.
Ososayensi benza uhlelo lwe-3D rocket propulsion system oluprintwe nge-XNUMXD
Iqembu labacwaningi abavela eMonash University eMelbourne liphumelele ekwakheni uhlelo lwe-3D rocket propulsion system.
INanoDimension isanda kwethula iphrinta yayo entsha yobungcweti ye-3D, imodeli eyabhabhadiswa ngegama le-DragonFly 2020 Pro.
URicoh uzokwakha isikhungo esisha sokunyathelisa se-3D eCatalonia
URicoh Spain usanda kumemezela ukuthi inkampani ihlela ukutshala imali engengaphansi kwesigidi sama-euro ...
Kusuka e-Rey Juan Carlos University of Madrid sithola imininingwane mayelana nokwakhiwa kwesoftware ye-3D ukwakha izindawo ezigobile.
UJosef Prusa wethule imodeli entsha ye-3D Printer. Le phrinta entsha ibizwa ngePrusa i3 MK3, imodeli entsha enombhede oshisayo kazibuthe ...
UHod Lipson, usosayensi waseColumbia Engineering, nethimba lakhe bakwazile ukudala isizukulwane esisha semisipha ephrintiwe yamarobhothi.
I-CATEC izoba ngeyokuqala e-Andalusia ukuthumela isiqeshana esiphrintiwe esikhaleni
I-CATEC ekugcineni nangemva kokuhlolwa okuningi futhi ikakhulukazi ngemuva kokuhamba kokulawulwa okuningi kwekhwalithi, izothumela isiqeshana esiphrintiwe esikhaleni.
IStratasys izoqeqesha futhi ivume abafundi beVET ezweni laseBasque ekuphrintiwe kwe-3D
IStratasys isayine isivumelwano sokusebenzisana neBasque Country ukuqeqesha nokugunyaza abafundi bayo emijikelezweni yokuqeqeshelwa umsebenzi.
UMimaki wethula iphrinta yayo enemibala eyi-3 million
Ukungena lapho sizokhuluma khona ngephrinta ye-Mimaki 3D, umshini okwazi ukusebenza nemibala efinyelela ezigidini eziyi-10.
I-Atom 3, iphrinta ye-3D ekwazi ukusebenza ne-SLA ne-FDM
I-Layer One, ngemuva kwesikhashana ilahlekile, ibuyele ezindabeni ngemuva kokwethulwa kwe-Atom 3 entsha, umshini wokuphrinta we-3D oguqukayo.
I-Nokia NX AM, umzamo ohlanganyelwe we-Nokia ne-HP
Inkampani yakwa-Siemens imemezele umphumela wokusebenzisana kwakamuva ne-HP yezizwe ngezizwe, umsebenzi oholele kwi-Nokia NX AM
I-Refabricator yindlela iNASA efuna ngayo ukuguqula ipulasitiki ibe yinto yesikhala
I-Refabricator uhlelo olusha olwenziwe yi-NASA ukufeza ukuthi izinto zepulasitiki zingaguqulwa zibe izinto zokuphrinta ze-3D.
IThales isivele inesikhungo esisha sokunyathelisa i-3D e-Casablanca
Ngemuva kwezinyanga eziningi zinikezelwe ekwakhiweni kwengqalasizinda, iThales ivula iminyango yeSikhungo sayo Somhlaba esisha eCasablanca.
Lesi isithombe sokuqala semikhumbi-ngwenya yase-US ephrintwe nge-3D yiNavy yezwe
Ukungena lapho sizokhuluma khona ngemiphumela yangempela i-United States Navy esiyizuzile lapho sakha isikebhe somkhumbi wamanzi ngokunyathelisa nge-3D.
BiliScreen, isicelo esisebenzisa ukuphrinta kwe-3D ukuthola umdlavuza we-pancreatic
I-BiliScreen isoftware eyenziwe yi-Ubiquitous Computing Lab yokuthi ngosizo lwedrowa ephrintiwe iyakwazi ukuthola umdlavuza we-pancreatic.
AbakwaSony bafaka isithwebuli se-3D ngqo ku-Xperia XZ1 yakho entsha
AbakwaSony baveza uhlelo lwayo olusha lweselula lwe-Xperia XZ1 ne-Xperia XZ1 Compact lapho ungajabulela khona isithwebuli esiphelele se-3D.
I-Thyssenkrupp ivula isikhungo esisha esizinikezele ekuphrinteni kwe-3D
I-Thyssenkrupp yinkampani eyaziwayo yaseJalimane ehlobene kakhulu nomkhakha wensimbi. Ngemuva kwezinyanga ezimbalwa ngizama zonke izinhlobo ...
UTumaker Voladd, iphrinta ye-3D exhunywe kupulatifomu enkulu yokuqukethwe online
UTumaker usanda kuqinisekisa ukuthi ekugcineni bazoba namayunithi azungeze i-3.000 ephrinta yeVoladd 3D ezotholakala kuphela ngenkathi kaKhisimusi.
I-Sculpto +, isizukulwane esilandelayo samaphrinta e-3D?
I-Sculpto + iyiphrinta ye-3D engenantambo ethatha imisebenzi yokuthi kuzoba yini isizukulwane esilandelayo samaphrinta asekhaya e-3D, kepha ingabe izokholisa?
I-PEAK Sport ithunywe ukuthi yenze lezi zicathulo ze-basketball ngokunyathelisa kwe-3D
I-PEAK Sport yinkampani ezinze eChina namhlanje isimangazayo ngokwethulwa kwezicathulo zebhasikidi ezenziwe ukuphrinta kwe-3D.
IVoxeljet isitshela ngobuchwepheshe bayo obusha bokuphrinta be-3D
Ukungena lapho sizokhuluma khona ngobuchwepheshe obusha bokuphrinta be-3D osonjiniyela abasanda kuthuthukisa iVoxeljet.
ESpain kuzoba semthethweni ukudala isikhumba ngokunyathelisa kwe-3D kusukela ekupheleni kuka-2017
Iqembu lochwepheshe lisanda kumemezela ukuthi balindele ukuthi iSpanish Agency for Medicines and Health Products ivumele ukuphrinta kwesikhumba ngasekupheleni kuka-2017.
Isinyathelo esisodwa esiseduze nokuqonda ukuthi ungayisebenza kanjani iKapton ngokunyathelisa kwe-3D
Umsebenzi wakamuva wabacwaningi abaningana eVirginia Tech University usisiza ukuthi siqonde ukuthi singasebenza kanjani neKapton ekuphrinteni kwe-3D.
I-3D phrinta sonke isakhiwo sangaphambili sale Volkswagen Caddy
Ukuhlangana kwezinkampani zaseJalimane kusebenze ukukhombisa ukuthi kungenzeka ukuthi kwenziwe iVolkswagen Caddy chassis enezindlela zokuphrinta ze-3D.
I-Toybox, iphrinta ye-3D yabancane endlini
Uma ufuna iphrinta ye-3D yendlu yakho, umshini okuthi ngaphezu kokuhlola lobu buchwepheshe ikuvumela ukuthi ubakhombise ...
I-Refabricator, iphrinta ye-3D ezonga i-NASA izinkulungwane zamadola
I-Refabricator yiphrinta ye-3D efaka ukusetshenziswa kabusha kwezinto futhi ingasetshenziswa esikhaleni njengoba kungakhi uthuli ukudala imicu ...
I-HP ne-Deloitte Memezela Isivumelwano Sokubambisana Esisha se-3D
Izinkampani ezimbili zamazwe amaningi ezifana ne-HP ne-Deloitte zisanda kumemezela ukuthi zifinyelele esivumelwaneni esisha sokubambisana esihlobene nokuphrinta kwe-3D.
Lokhu kubukeka kanjena emabhalekisini kakhonkolo amasha agxiviziwe e-US Army
Emzameni wabo wokwethula ukuphrinta kwe-3D emisebenzini yabo, i-United States Army isikhombisa ibhala labo elisha eliphrintiwe nge-3D.
I-XYZprinting iveza umbala wayo omusha we-da Vinci
Ngemuva kwesikhathi esithile sokungasebenzi, i-XYZprinting ibuyela kumthwalo ngephrinta entsha ye-3D ebhabhadiswe njenge-da Vinci Colour.
Bakha isithwebuli esikhulu se-3D sibonga i-Raspberry Pi
Bakha isithwebuli esikhulu se-3D sibonga amabhodi wePiCam amaningana nePi Zero eziningana, isethi eshibhile futhi engabizi kakhulu yalesi sithwebuli esikhulu ...
I-BASF ilawula umenzi we-Dutch filament Innofil3D
I-BASF isanda kumemezela ukuthengwa kwe-Innofil3D, umkhiqizi waseDashi wemicu yokuphrinta kwe-3D enamaphrojekthi amaningi aphesheya.
I-Adidas iletha ukuphrinta kwe-3D kolayini bayo bokukhiqiza
Ngemuva kwezinyanga eziningi zivivinya ukuphrinta kwe-3D, i-Adidas ekugcineni izokuletha kulayini wayo wokukhiqiza izicathulo zemidlalo.
IDassault Systèmes ukuqala ukunikeza isoftware ngokufunwa
UDassault Systèmes usanda kukhipha isimemezelo sabezindaba ememezela ukuthi bazoqala ukunikeza ama-software kubantu besithathu uma befunwa.
Lokhu kubukeka kanjani iqoqo lezimpahla ezinyathelisiwe likaDanit Pelleg le-3D
UDanit Pelleg, umqambi wezingubo odabuka kwa-Israyeli, usanda kusimangaza ngeqoqo lakhe elisha lezingubo ezenziwe ukuphrinta kwe-3D.
I-United States Congress iyavuma ukusetshenziswa kokuphrinta kwe-3D kwezempi
Ngaphandle kokuthi yayivele isetshenziswa, i-United States Congress ekugcineni isishaye umthetho wokuvumela ukusetshenziswa kokuphrinta kwe-3D kwezempi.
Abaphenyi bathuthukisa izindlela ezintsha zokuvimbela iphrinta yakho ye-3D ukuthi ingagencwa
Ithimba labaphenyi baseRutgers University-New Brunswick lisungule indlela yokuvikela iphrinta yakho ye-3D ukuthi ingagqekezwa.
INorth Korea iqala ukusebenzisa ukuphrinta kwe-3D ekwenziweni kwezikhali
Onjiniyela nabaqambi baseNyakatho Korea bangasebenza ekwenzeni izikhali besebenzisa ubuchwepheshe be-3D bokuphrinta.
EMalaga, izingcezwana eziphrintiwe sezivele zisetshenzisiwe esikhundleni se-plaster
EMalaga, izingcezu eziphrintiwe sezivele zisetshenzisiwe ukufaka esikhundleni sokuphonswa okwephuka. Ukuthuthuka okuthuthukisa ikhwalithi yempilo yeziguli ...
I-Markforged inikeza amaphrinta ayo amasha ezimboni ze-3D
UMarkforged usanda kukhipha incwadi entsha lapho ethula khona zonke izimfanelo zeX3 neX5 entsha, amamodeli amabili asevele etholakala
Dlala i-Nintendo switchch yakho ngesandla esisodwa ngenxa yale adaptha
Ngenxa yale adaptha epulasitiki ekhiqizwe ukuphrinta kwe-3D ungadlala iNintendo switchch yakho ngesandla esisodwa nje.
Cocoon, isihlalo esiphrintiwe se-3D esenziwe nguLouis Voitton
ICocoon yigama inkampani yokunethezeka nemfashini uLouis Voitton ebhabhadise ngalo isihlalo sayo esisha esenziwe ukuphrinta kwe-3D.
Lesi sandla esiyirobhothi siyakwazi ukuhumushela imisindo olimini lwezandla
Inyuvesi yase-Antwerp eBelgium inikwe umsebenzi wokuthi yakhe isandla serobhothi esikwazi ukuhumusha imisindo ibe olimini lwezandla.
I-Russia iqala ukwamukela amasiginali avela kusathelayithi yayo ephrintiwe eyi-3D
Ngemuva kwezikhathi eziningi zokulinda, ekugcineni iRussia Space Agency iqinisekisa ukuthi isathelayithi yayo ephrintiwe eyi-3D isebenza kahle.
I-Ortho Baltic isibonisa ukufakelwa kwayo kwezokwelapha okuseqophelweni eliphezulu
I-Ortho Baltic iyinkampani esekwe eLithuania eyenza izingqikithi zekhwalithi ephezulu nokwamukelwa kokufakwa kwayo kwezokwelapha okuphrintiwe.
Le yindlela okubukeka ngayo iqoqo elisha lezingilazi ezenziwa ukuphrinta kwe-3D kusuka ku-OXYDO
I-OXYDO, uhlobo oludumile lwase-Italy lwama-eyewear, isanda kusimangaza ngeqoqo layo elisha, uchungechunge lwamamodeli a…
IMade In Space isivele ikwazi ukukhiqiza izingxenye ngokunyathelisa kwe-3D endaweni efana nesikhala
IMade In Space yinkampani ezinze eCalifornia ekwazile ukukhiqiza izingxenye ngokunyathelisa nge-3D endaweni enezimpawu ezifanayo zesikhala
IMiam Factory, inkampani eyenza ushokoledi ngokunyathelisa nge-3D bese iyithumela ekhaya lakho
IMiam Factory ingenye yezinkampani zokuqala ezikhethekile ngokweqile ekwakhiweni kwezingxenye zikashokolethi ngokuphrinta kwe-3D.
Manje sekungenzeka ukuthi kwenziwe amakholomu we-3D aphrintiwe
Kusuka e-Institute of Biomedical Research of Hospital La Paz sithola uphenyo ngamakhemikhali angakhiqizwa yi-3D.
Sihlaziya imicu yeFomuFutura: I-StoneFil, i-HDGlass ne-EasyFil PLA
Imicu yeFomFutura: I-StoneFill intambo efuna ukulingisa itshe, i-HDGlass intambo eguqukayo, ne-EasyFill PLA Black
I-Levi ibonisa iqoqo layo lokuqala lamabhantshi elenziwe ukuphrinta kwe-3D
I-Levi's isanda kumemezela ukufakwa kobuchwepheshe bokuphrinta bendwangu be-3D ngaphakathi kolayini bayo bokukhiqiza, okwamanje ngamabhantshi ayo ama-denim.
Ngenxa yobuchwepheshe be-blockchain, amaphrinta we-3D angavikeleka kakhulu
Ngenxa yokusetshenziswa kobuchwepheshe be-blockchain, amaphrinta wethu we-3D angakwazi ukuvikela idatha yakho futhi alwe nobugebengu.
I-EHLA, indlela entsha yokusebenza ngokunyathelisa nge-3D yensimbi
Inkampani kaTrumpf isanda kumemezela i-EHLA, indlela entsha yokufeza ukumbozwa kwensimbi kwezingxenye ezenziwe ukuphrinta kwe-3D.
UPoietis ufuna utshalomali lwama-euro ayizigidi ezimbili ngenxa yeWiseed
Umnyango wezokuxhumana wenkampani yaseFrance iPoietis usanda kumemezela ukusungulwa komkhankaso omusha eWiseed wokuthola imali.
Intambo yokuphrinta kwe-3D emlotheni womngcwabo
INarbon yinkampani yaseSpain enolwazi ngokukhiqiza intambo yokuphrinta kwe-3D emlotheni womngcwabo.
Kusemthethweni, iProdways Group ithenga ama-AvenAo Industries
Isikhathi esithile impela manje, sekube namahemuhemu amaningi ekugcineni aqinisekiswe yiProdways Group ngokuthengwa kwe-AvenAo Industries.
I-Eyeagnosis, uhlelo oluphrintiwe lwe-3D luxilonga izifo zamehlo
UKavya Kopparapu, usebenzise i-smartphone, iphrinta ye-3D kanye ne-AI ukwenza i-Eyeagnosis, uhlelo olushibhile noluphathekayo lokuxilonga iso.
UMnyango Wezokuvikela uhlinzeka ngephrinta ye-3D endaweni yayo eseSegovia
UMnyango Wezokuvikela usanda kumemezela ukufika kokuphrintwa kwe-3D esizeni sayo eSegovia ukuze kungadingeki uku-oda izingxenye ezivela eMelika.
IMercedes-Benz iqala ukukhiqiza izingxenye zezimoto zayo ngokunyathelisa nge-3D
Amaloli akwaMercedes-Benz, ohlukanisa amaloli wenkampani yezinkanyezi edumile yaseJalimane, enze ingxenye yawo yokuqala ephrintiwe ye-3D yamaloli.
I-Loom, isibonelo esisha sezingubo eziguquguqukayo ezenziwa ukuphrinta kwe-3D
I-Loom yigama inkampani iCosine Additive ebhabhadise ngalo ingubo yalo entsha eguquguqukayo futhi eguquguqukayo eyenziwe ukuphrinta kwe-3D.
Ngenxa yomklami uDanit Peleg ungagqoka ijakhethi ephrintiwe ye-3D
UDanit Peleg, umsiki wengqephu, usanda kuqinisekisa ukuthi uzothengisa amayunithi ayi-100 webhantshi lakhe elisha elenziwe ukuphrinta kwe-3D.
IMatch.com 3D iphrinta ozakwethu ongaba nabo emkhankasweni wayo wakamuva
IMatch.com 3D iphrinta ozoshada nabo emkhankasweni wabo wakamuva, itende elizoqhamuka elizofaka amanani amancane aprintwe nge-3D angama-singles ayisikhombisa.
Gqoka i-Raspberry Pi yakho nalezi zimo zokuqala
Ukuphrinta kwe-3D kuvumela inketho yokugqoka amabhodi ethu okusajingijolo okwangempela kanye nezindlu zabantu ezinikeza ukubukeka okuhlukile kwi-Raspberry Pi
IBadger, irobhothi elikwazi ukumba imigudu kanye nemisele engu-3D yokuphrinta
IBadger yiphrojekthi eyenziwe yiYunivesithi yaseGlasgow kanye neCarlos III University yaseMadrid yokumba imigudu nokuphrinta imisele.
I-FLYPI, Isibonakhulu Somthombo Ovulekile esuselwa kuRasperry Pi ngo- € 100
I-FlyPi ifaka izingxenye eziphrintiwe ze-3D, i-Raspberry Pi microcomputer, namasekethe amaningi abiza kancane, njengama-LED kanye nama-webcam.
I-Cell3Ditor, iphrojekthi efuna ukukhiqiza amaseli kaphethiloli ngokunyathelisa kwe-3D
ICell3Ditor yiphrojekthi ephakanyiswe yi-Energy Research Institute of Catalonia efuna ukudala amaseli kaphethiloli ngokunyathelisa kwe-3D.
Le ndlela entsha izokuvumela ukuthi wenze i-3D scan ngaphansi kwamanzi
Kunabacwaningi abaningi emhlabeni jikelele abaqhubeka nokusebenza ngamasu amasha namathuba ahlobene nobuchwepheshe ...
Ngenxa yalobu buchwepheshe be-3D, i-Arrinera Hussarya entsha isakhiwe
U-Arrinera Hussarya uyisibonelo esihle sephrojekthi lapho, ukuthola ubukhali nokushesha, sisebenze nobuchwepheshe obuhlukile bokuphrinta be-3D.
I-Obsidian, iphrinta ye-3D engaba ngeyakho ngama-dollar angama-99
Ukungena lapho sizokhuluma khona nge-Obsidian, iphrinta entsha ye-3D eyenziwe ngu-Kodama efuna ukuxhaswa nge-Kickstarter futhi ingaba eyakho nge $ 99
IBurger King Imemezela Uhlelo Olusha Lokuphrinta lwe-3D
UBurger King, ngokubambisana ne-Atomic Lab, usanda kwethula uhlelo olufuna ukuletha ukuphrinta kwe-3D kulabo abadinga kakhulu.
Izinkinga ze-DJI Spark, amanye amayunithi awe esibhakabhakeni
Abanye abasebenzisi baqala ukubika izimbungulu ezithile ezikhona nge-DJI Spark yabo, amanye amayunithi awela esibhakabhakeni ngaphandle kwesixwayiso.
Leli yibhuloho lokuqala elenziwe ukuphrinta kwe-3D eChina
Ukungena lapho sizokhuluma khona ngezimpawu zebhuloho lokuqala elenziwe kusetshenziswa ubuchwepheshe be-3D bokuphrinta eChina.
Inqubo entsha yokuskena ye-3D isebenzisa umgomo we-Archimedes
Ithimba lososayensi lisebenzise umgomo wasendulo wokuhambisa amanzi wase-Archimedean ukwenza inqubo entsha yokuskena ye-3D.
IDesktop Metal ithola utshalomali lwemali elinganiselwa ku- $ 115 million
Inkampani yeDesktop Metal isanda kukhipha isimemezelo sabezindaba imemezela ukuthi bathole utshalomali lwemali eyizigidi ezingama-115 zamadola.
Ngamafayela akhonjisiwe ungenza izikhali eziphrintiwe ze-3D ezingaphansi kwama-euro angama-15
Ngokwezifundo zakamuva, ngamafayela afanele, sekuvele kungenzeka ukwenza izikhali eziphrintiwe ze-3D ngentengo engaphansi kwama-euro angama-15.
Leli qembu likwazile ukuguqula ukukhishwa kwe-CO2 kwenze upulasitiki wokuphrinta kwe-3D
EHarvard Medical School bakwazile ukusungula inqubo yokuguqula ukukhishwa kwe-CO2 kuplastiki kokuphrinta kwe-3D.
Yile ndlela ukuphrinta kwe-3D 'okusize ngayo' uChris Froome ukunqoba iTour de France entsha
Ngale ndlela elula uChris Froome wathola ubuchwepheshe obufana nokuphrinta kwe-3D ukumsiza anqobe iTour de France
ISagunto izibophezele ekusebenziseni ama-drones ukuvikela ababhukudi emabhishi ayo ukuthi baminze
Izidumbu zabahlengikazi basolwandle iSagunto zizosebenzisa ama-drones ukusiza ukuqapha nokuvikela izingozi zamanzi emabhishi abo.
Lokhu kungukubonakala kwesiphuphutheki esincane esenziwe iqembu labafundi abavela eMadrid
Ngisazikhumbula izinsuku zami njengomfundi wasesikoleni esiphakeme, mhlawumbe besingahlosile ukuphakama ngezizathu ezahlukahlukene, kepha ngikukhumbula njengo ...
I-Arkema isheshisa ukukhiqizwa kokupholisa izinhlaka ngenxa yefektri yayo entsha yaseChina
U-Arkema uzimisele ukuba ngenye yezinkampani ezihola phambili emkhakheni wokuphrinta we-3D futhi, ngalokho ...
IStratasys yokwenza izingxenye ezahlukahlukene ze-Airbus A350 XWB
I-Airbus isanda kumemezela ngokusemthethweni ukuthi iStratasys izophatha ukukhiqiza izingxenye ezahlukahlukene zezindiza i-A350 XWB.
Ngenxa yokuphrinta kwe-3D, izihlalo zebhanoyi ezilula zingenziwa
Ngenxa yomklami oyingcweti u-Andreas Bastian, izihlalo zendiza ezilula kakhulu manje zingenziwa ngenxa yokusetshenziswa kokuphrinta kwe-3D.
Ubhontshisi, iphrinta ye-3D SLA enqoba iKickstarter
Ukungena lapho sizokhuluma khona ngoBean, iphrinta yohlobo lwe-SLA-3D eklanywe yiKudo3D esesikhukhumeze umkhankaso wayo wezezimali owethulwe kuKickstarter.
I-Qlone iyisithwebuli se-3D esithakazelisayo sezinto ezincane ezethuliwe ngokuphelele mahhala ngabakwa-Eyecue Vision Technologies.
Sichaza ukuthi ubuchwepheshe be-DMLS busebenza kanjani, lobu buchwepheshe buvumela ukukhishwa okuqondile kwensimbi nge-laser.
Amagugu ayigugu ekuphrintiwe kwe-3D. Izindwangu zomlomo zikaRuby
Inkampani i-3Dverkstan yethule ulayini womkhiqizo we-Olsson Ruby. Umkhiqizi udale imilomo yokuqala ene-ruby.
I-General Electric Induction ne-Aidimme Team Ukuze Basebenzele Ukuphrinta Kwe-Copper 3D
Ngenxa yokusebenzisana kwakamuva phakathi kweGeneral Electric Induction ne-Aidimme, kube nokwenzeka ukudala amakhoyili wokungeniswa ngokunyathelisa kwe-3D.
I-Intel iyeka ukuthengisa imikhiqizo yayo kaJoule Galileo no-Edison.
Lawa mabhodi ethulwe ngo-2014 afaka izici ezithakazelisayo, kepha bekunganele ukubhekana neRaspberry Pi ne-Arduino
Ikea imemezela umugqa wayo omusha wemikhiqizo ephrintiwe ye-3D
Kusuka emnyangweni wezokumaketha e-Ikea kusanda kwethulwa umbiko wabezindaba omemezela ukuthi ...
Le nhliziyo ephrintiwe ye-3D ikwazile ukushaya isigamu sehora
Kusuka e-ETH University of Zurich sithola imininingwane eqenjini labaphenyi abenze inhliziyo ephrintiwe ye-3D.
Isibungu sisikhombisa izinzuzo zerobhothi laso elisha lokwakha izitini
ICaterpillar imemezela ukutshalwa kwezimali okungafika ezigidini eziyishumi zama-euro ku-Fastbrick Robotics, okuyinkampani ephethe ukuklama irobhothi elinezithukuthuku zokwakha.
ILeapfrog Bolt Pro, iphrinta yedeskithophu enobuchwepheshe
IBolt Pro yiphrinta entsha ye-3D evela kwaLeapfrog, imodeli enikeza imiphumela yezimboni kepha ingasetshenziswa njengephrinta yedeskithophu ...
Amaphrinta angama-3 e-United States Navy
Njengomkhulumeli we-United States Navy ephawule esidlangalaleni, ngokusobala namhlanje sebenabo amaphrinta angama-40 3D asebenzayo.
Ukuhlaziywa kweskena se-XYZPrinting 3D scanner
Sihlaziya imishini yesithwebuli se-XYZPrinting 3D. Isithwebuli esiphathwayo esinenani elikhangayo, okulula ukusisebenzisa nokuthi singahambisa noma yikuphi.
Bayakwazi ukwenza igwebu le-graphene ngenxa yokuphrinta kwe-3D
Ngenxa yale ndlela entsha esanda kushicilelwa, manje abantu bazokwazi ukwenza igwebu le-graphene ngobuningi.
Imiphongolo yama-clarinets ngokuphrinta kwe-3D
Ngenxa yephrojekthi eyenziwe yi-University of the Balearic Islands, manje sesingakwazi ukwenza imiphongolo yama-clarinet ngokunyathelisa kwe-3D.
Ngenxa yalokhu okufakelwayo ungenza isithupha sesibili sesandla sakho
Le phrojekthi enhle isikhuthaza ukuthi senze i-prosthesis eyinkimbinkimbi futhi esebenzayo yesandla sethu sisebenzisa izindlela zokuphrinta ze-3D.
I-Xact Metal idala iphrinta yensimbi ye-3D efinyeleleka kuzo zonke izinkampani
IXact Metal, isiqalo esisha saseMelika, yethula iphrinta yayo yokuqala yensimbi engu-3D ukungena emakethe, iXM200.
Ukuphrinta kwe-3D kuvumela ukwakhiwa kwamafomu amasha we-graphene
Kusuka eChina basikhombisa indlela entsha ezokwazi ukukhiqiza izakhiwo ze-graphene ezilula kakhulu nezimelana nokuphrinta kwe-3D.
I-AONIQ inesibindi sokuphrinta kwe-PVC 3D
I-AONIQ isanda kumemezela ukufika emakethe ngo-Agasti 1, 2017 wephrinta entsha ye-3 888D, imodeli ekwazi ukusebenza ngepulasitiki ye-PVC.
Ngenxa yeFuturalve, kulindeleke ukuthi kuthuthukiswe ama-turbine ngokusebenzisa ukuphrinta kwe-3D
I-Futuralve yiphrojekthi entsha eyenziwe nguRenishaw efuna ukudala izinto ezintsha zokuphrinta kwe-3D ezizosetshenziswa ku-aeronautics.
Iphrinta ye-3D yasekhaya kaTumaker izongena emakethe ngoKhisimusi
Ngemuva kokulinda isikhathi eside, isikhulu esiphezulu seTumaker ekugcineni sisitshela ukuthi iVoladd entsha izongena emakethe ngoKhisimusi.
IVolumic Stream MK2, isizukulwane esisha samaphrinta e-3D siyeza
Ukusuka eFrance sithola idosisi yezindaba lapho sethulwa khona ngeVolumic Stream MK2 nazo zonke izici zayo zobuchwepheshe ezithakazelisayo.
IMosaic Manufacturing isikhombisa izici ezikhethekile zePalette +
IMosaic Manufacturing iyinkampani eyakha i-Palette +, isixazululo esimangazayo sokuxuba imibala ehlukile kuphrinta yakho ye-3D.
I-APWorks neDassault Systems Partner Yokuletha Amathuba Angcono Emkhakheni We-Aerospace
I-APWorks ingenye yezinkampani ezisebenza kakhulu emakethe, hhayi ize sikhuluma ngenkampani engaphansi ...
Nakhu ukuthi imoto ephrintiwe i-3D edalwe yi-KLIO Design ibukeka kanjani
Umkhiqizi waseNingizimu Korea i-KLIO Design, ogxile ekwakhiweni nasekukhiqizeni izimoto, usikhombisa imoto yaso entsha ephrintiwe eyi-3D.
Ukuhlanganiswa nokuhlaziywa kwephrinta ye-3D ku-KIT BQ Hephestos
Kulesi sihloko sizokuchazela ukuthi yini isipiliyoni sethu ebesihlanganisa iphrinta ye-3D ku-KIT BQ HEPHESTOS. Iphrinta yethulwe ngasekupheleni kuka-2016
Ngenxa yalobu buchwepheshe kungenzeka ukwazi ukuthi yini ngaphakathi kwegumbi elivaliwe
Ngenxa yalobu buchwepheshe obusha obenziwe eCalifornia, ngama-drones amabili nje ungazi ukuthi yini ngaphakathi kwegumbi.
Imoto yokuwina ye-Pikes Peak ka-2017 isebenzise izingxenye ezahlukahlukene ezakhiwe ukuphrinta kwe-3D
Ngenxa yomsebenzi omuhle wePoly-Shape ekhiqizweni kwezingxenye ze-titanium, imoto kaRomin Dumais ikwazile ukunqoba iPikes Peak.
INetherlands ikhombisa ngokuziqhenya ibhuloho layo lebhayisikili elisha le-3D
Onjiniyela abavela e-Eindhoven University of Technology basikhombisa ibhuloho labo elisha lamabhayisikili elenziwe ngokuphelele ukuphrinta kwe-3D.
Ukuphrinta kwe-3D sekuvele kuthathwa njengokulingana nama-x-ray ekhulu lama-XNUMX ezibhedlela
Ukukhonza abantu abadumile emkhakheni wezokwelapha, ukuphrinta kwe-3D sekuvele kuthathwa njenge-X-ray yekhulu lama-XNUMX.
I-GE Addict ATLAS, enye yamaphrinta we-aeronautical 3D amakhulu kunawo wonke emhlabeni
I-GE Additive, ukuhlukaniswa kweGeneral Electric, isibonisa iphrinta yayo entsha ye-ATLAS 3D, imodeli ekahle embonini yezindiza.
Isidoda singasebenza njengethuluzi lokulwa nomdlavuza ngenxa yokuphrinta kwe-3D
Ithimba labaphenyi abavela e-University of Chemnitz liphumelele ekwakheni inqubo yokwelapha umdlavuza wesibeletho ngesidoda.
I-Catec ne-Alestis bajoyina ngokubambisana ukuthuthukisa ubuchwepheshe obusha bokuphrinta be-3D
U-Alestis Aerospace no-CATEC basayina isivumelwano sokusebenzisana sokuhlanganisa ngokuhlanganyela izindlela ezintsha zokuphrinta ze-3D zezinto ezihlanganisiwe.
I-China ihlola ngempumelelo i-drone yayo yokuqala ephakeme ephezulu yelanga
Inkampani iChina Aerospace Science and Technology Corporation inikezwe umsebenzi wokuthuthukisa nokwakha idrone yokuqala yelanga eChina.
IMichelin isikhombisa isondo layo eliphrintiwe elingashabalali le-3D
IMichelin isibonisa isondo layo elisha elingafihlakali elenziwa ngokuphelele ngokusebenzisa amasu wokuphrinta e-3D kanye nama-biomaterials.
IBlackBelt, iphrinta ye-3D lapho ubude bezingcezu bungeke baba yinkinga
Ngenxa yesikhulumi sokubambisana seKickstarter, namuhla ngingakwethula iBlackBelt, iphrinta ye-3D ekwaziyo ukwenza izinto zobude obungenamkhawulo.
UBoom Supersonic uphendukela ekuphrinteni kwe-3D lapho kwenziwa izindiza zayo ze-ultrasonic
Kusuka kwaBoom Supersonic bamemezela isivumelwano esenziwe neStratasys sokusebenzisana ekwakhiweni nasekuhlolweni kwendiza yabo entsha ephezulu.
U'Unibody 'uwina umklomelo womklami ohamba phambili emncintiswaneni ohlelwe ngu-Olivetti
IValencia School of Superior Art of Design ikwazile ukuzibiza njengompetha wohlelo lwesibili lwe-Olivetti Design Contest 2017.
Sivakashele iMenzi Faire Barcelona 2017
Umcimbi lapho kwenza abathanda ukuhlangana, babelane lonke ulwazi lwabo nobuciko ngezinkulumo, imihlangano yokufundisa kanye nemiboniso.
Le yiphrinta entsha ye-3D nekhabhathi yokukala ye-3D eyenziwe nguGrupo Sicnova
IGrupupo Sicnova isanda kwenza izindaba ngemuva kokwethulwa ngokusemthethweni kwephrinta entsha ye-3D yokusetshenziswa kwezimboni kanye nedokodo elisha lokulinganisa le-3D.
ECanada sebevele besebenza kumaphrinta e-3D akwazi ukuziphindaphinda
Ithimba labaphenyi abavela eCanada seliqalile ukwenza iphrojekthi efuna ukwakha iphrinta ye-3D ezenzekelayo.
IFormlabs Fuse 1, iphrinta yokuqala ye-SLS yenkampani
IFormlabs Fuse 1 yiphrinta yohlobo lwe-SLS entsha inkampani yaseNyakatho Melika efuna ukunqoba ngayo lo mkhakha onzima wemakethe.
I-HP iyaqhubeka nokwandisa ukubheja kwayo emkhakheni wokuphrinta we-3D
I-HP yethula izixazululo zayo ezintsha zebhizinisi ngokususelwa kubuchwepheshe bayo beJet Fusion obusebenzisa umgubho weRAPID + TCT.
I-European Defense Agency isivele isebenza nokuphrinta kwe-3D
I-European Defense Agency isivele isebenza kuphrojekthi ehlose ukuklama indlela yokuletha ukuphrinta kwe-3D enkundleni yempi.
Imicu emisha yokuphrinta kwe-3D eyenziwe ngemfucuza yezolimo
Lesi sikhathi kufanele sikhulume ngohlelo olusha lapho namuhla kuningi ...
Ukubuyekezwa Kwephrinta ye-Wanhao Duplicator 3 7D
Sihlaziye iphrinta ye-Wanhao Duplicator 3 7D futhi esebenzisa i-resin enesithombe esivumayo ukuhlanganisa imiklamo yethu ngesinqumo esehlukile
ISuperGiz, into yokufakelwa ongazenzela yona ekhaya
ISuperGiz, iphrojekthi yomthombo ovulekile, uzokwazi ukwenza futhi ufunde ukuklama nokwenza izinguquko kungalo yakho yokufakelwa usekhaya lakho.
Yilokhu ikhekhe kalamula elenziwe ukuphrinta kwe-3D libukeka
Ngesikhathi sokugujwa kweFabLab yaseToulusse kwethulwe indlela ezwakalayo yokwenza ikhekhe ngokunyathelisa kwe-3D.
Khohlwa isikrini sokuthinta ngalawa magilavu ​​we-Arduino touch
B. Aswinth Raj ungumsebenzisi okwazile ukudala amagilavu ​​athintekayo, amagilavu ​​asivumela ukuthi silawule amakhompyutha ngokuthinta ...
Lawa ngamaphrinta amabili amasha adalwe yi-M3D
I-M3D ibuyile ukuzosethula ngokusemthethweni kumamodeli amabili amasha, inguqulo ethuthukisiwe yeMicro yayo kanye nenguqulo esezingeni eliphakeme kakhulu.
ISinterit imemezela ukwethulwa kwesihlungo semikhiqizo yayo
ISinterit yinkampani yasePoland ehlobene nomhlaba we-3D wokuphrinta owaziwa kakhulu eYurophu namuhla othula ngesihlungo sayo esisha.
I-United States izosebenzisa ukuphrinta kwe-3D ukudala amabhomu
Izwe laseMelika lisanda kumemezela ukuthi uMnyango Wezokuvikela uzosebenzisa ukuphrinta kwe-3D ekwakheni amabhomu afana neMOAB.
Le phrinta ye-3D iyakwazi ukukhiqiza izinto ezinesisindo esifinyelela kutani
Kusuka eRussia, ikakhulukazi edolobheni laseTomsk, sithola izithombe zeprinta enkulu ye-3D yensimbi ekwazi ukukhiqiza izingxenye ezifika kwithani elilodwa.
I-Fidget Spinner, ithoyizi esingalakha
I-Fidget Spinner iyindlela yakamuva phakathi kwabancane nabadala. Sikutshela ukuthi ungayithola kanjani enye yalezi ziqongqo zokuphotha ngesandla sibonga i-Free Hardware ...
I-ELIX Polymers isebenza ekwakhiweni kwamamaki amasha wokuphrinta kwe-3D XNUMXD
Inkampani yaseSpain i-ELIX Polymers isanda kumemezela inhloso yayo yokutshala imali ekwakhiweni kwamamaki amasha epulasitiki ye-ABS.
I-EnvisionTEC iyasijabulisa ngezinto zokwakha ezintsha ezingekho ngaphansi kwezingu-7 zamaphrinta we-3D
Labo ababhekele i-EnvisionTEC baveze izinto ezingekho ngaphansi kweziyisikhombisa zokusetshenziswa okukhethekile ngabaphrinta babo be-3D abathandekayo njalo.
Lesi yisiphepheli sokuqala semikhumbi esakhiwe ukuphrinta kwe-3D
I-RAMLAB kwakuyinkampani yokuqala kulo lonke elaseYurophu eyayikwazi ukukhiqiza i-propeller yesikebhe esebenzayo isebenzisa ubuchwepheshe bokuphrinta be-3D.
Nikeza iphrinta yakho ye-3D sibonga ngokuthinta i-AstroBox Touch
I-AstroBox Touch iyisikrini sokuthinta ongasixhuma cishe kuwo wonke amaphrinta e-3D emakethe futhi okungaba ngokwakho nge $ 100.
Ngenxa yale phrinta entsha ye-3D, ukufakelwa kwe-silicone yezokwelapha kungenziwa ngamahora
Ucwaningo olwenziwe yiYunivesithi yaseFlorida lwenze kwaba nokwenzeka ukuthuthukisa indlela entsha yokuphrinta i-silicone ye-3D yokusetshenziswa kwezokwelapha.
Izingcezu zensimbi ezingama-79 eziphrintiwe nge-3D sezivele zijikeleza umhlaba
IThales Alenia Space isilinganisela inani lezicucu eziphrintiwe ze-3D namuhla abazethule zaya emkhathini kuma-satellite abo.
Isathelayithi encane kunazo zonke yeNASA inesisindo esingu-64 gram futhi iphrintiwe
Indoda eneminyaka engu-18 ubudala yaseNdiya idale i-NASA isathelayithi encane enesisindo esingu-64 grams kuphela futhi esenziwe iphrinta ye-3D enekhabhoni ...
IClay XYZ isibonisa iphrinta yayo yobumba ye-3D
Thola iphrinta ye-Cay XYZ ye-ceramic 3D ethokozisayo ngentengo yesethulo eyi- $ 699 nje nge-Kickstarter.
INorthwestern University idala amaqanda wokufakelwa ngokunyathelisa kwe-3D
Ithimba labaphenyi nososayensi abavela eNyakatho-ntshonalanga University baphumelele ekwakheni i-ovary yokuqala yokuprinta yokufakelwa ye-3D.
I-ESA iyaphumelela ekwakheni izitini kusetshenziswa ukuphrinta kwe-3D kanye ne-moondust
Ososayensi nabaphenyi be-ESA bayakwazi ukwenza ubuchwepheshe obusha bezitini zokuphrinta ze-3D enyangeni.
IVolkswagen izophendukela ekuphrinteni kwe-3D ukwenza izingxenye zama-Classics ayo
Akungabazeki ukuthi kukhona imakethe enamandla ngokwengeziwe engahle inganakwa ngabaningi, sikhuluma ...
I-Aleph Objects idala intambo yokuqala mahhala ngokuphelele yamaphrinta e-3D
Inkampani yakwa-Aleph Objects yethule intambo yokuqala yamahhala ye-ABS. Intambo esingazenzela yona sibonga kumhlahlandlela nemibhalo ...
Sihlaziya imicu ye-FFFworld: Flexible, PETG, ABS, Metal ne-PLA
Ukubuyekezwa kwentambo ye-FFFworld: Flexible, PETG, ABS, Metal ne-PLA. Sizobeka ubuchwepheshe bethu esivivinyweni ukuze sithole imiphumela emihle kakhulu
U-Obi Juan, unjiniyela odumile waseSpain uJuan González, uzuze umklomelo we-O'Really Open Source. Ukuba owokuqala waseSpain oqokiwe nowine umklomelo ...
Iphrinta yeLegio evela kumkhiqizi waseSpain uLeon 3D ithunyelwa ngekithi yomhlangano. Yakhelwe futhi yenziwa eSpain. Ungasebenzisa anhlobonhlobo izinto
IMeat & Imfuyo ukuqala kwase-Australia okuvele kusimangaze ngokwethulwa kweprinta yenyama entsha ye-3D.
IGeneralitat yaseCatalonia izotshala ama-euro ayizigidi ezingama-28 ekuphrintweni kwe-3D
IGeneralitat yaseCatalonia isanda kumemezela ukutshalwa kwezimali kwama-euro ayizigidi ezingama-28 ekwakhiweni kweGlobal 3D Printing Hub eBarcelona.
Izwekazi linentshisekelo ekuphrintweni kwensimbi kwe-3D
Izwekazi lisanda kumemezela isivumelwano neConcept Laser sokufaka amaphrinta amabili e-3D ensimbi embonini yawo.
Izibuko ezenziwe ngokwezifiso zokuphrinta kwe-3D zifika e-El Corte Inglés
U-El Corte Inglés umemezela ukuthi, nge-subsicaary yayo i-Optica 2000, izoqala ukuthengisa izingilazi eziphrintiwe zeMimic Eyewear 3D ezindaweni zayo eziningana.
IGeneral Electric imemezela ukutshalwa kwezimali okungama-euro ayizigidi eziyi-100 ekuphrintweni kwe-3D
IGeneral Electric izotshala amanye ama-euro ayizigidi eziyi-100 ukuthuthukisa nokuthuthukisa ubuchwepheshe ngemuva kokuphrinta kwensimbi i-3D.
I-Nokia iletha ukuphrinta kwe-3D ekwakhiweni kwezitimela
I-Nokia ingenye yezinkampani ezinikela kakhulu ukuletha ukuphrinta kwe-3D kuzo zonke izinhlobo ze ...
I-MIT isibonisa injini yayo ye-jet ephrintwe ngokuphelele ngepulasitiki
Elinye lamaqembu e-MIT azinikele ekwakhiweni kwezinjini eziqhubayo selisanda kudala injini yokuqala yokusebenza ye-jet ephrintwe ngepulasitiki.
IPostProcess Technologies ithola utshalomali lwamarandi ayizigidi ezi-4 ukuqhubeka nokwenziwa kobuchwepheshe bayo.
IPostProcess Technologies isanda kuthola utshalomali lwamarandi ayizigidi ezingama-4 ukuqhubeka nokuthuthukiswa kobuchwepheshe bayo obuthokozisayo.
I-Wiivv ithola u- $ 1,1 wezigidi ukukhiqiza izimbadada ezenziwe ngokwezifiso ze-3D
I-Wiivv iyisiqalo esizinze eCanada esasungulwa ngenhloso eyodwa yokuthuthukisa izicathulo ...
IDesktop Metal maduzane izosivumela ukuthi siphrinte izingxenye zensimbi ekhaya
IDesktop Metal ifuna ukwenza ukuphrinta okungabizi kwe-3D kwezingxenye kube ngokoqobo kusetshenziswa insimbi njengezinto zokwakha ngokusebenzisa amaphrinta angabizi
AbakwaRenault Sport bafuna ukuletha ukuphrinta kwe-3D kuFomula 1
Sisebenzisa ithuba lokugujwa kweShanghai Auto Show, iRenault Sport isikhombisa uhlobo lwayo olusha lwe-RS 2027 Formula 1.
I-NASA Yethula Indwangu Yesikhala Esisha "Ehlakaniphile" Yenziwe Kusetshenziswa Ukuphrinta Kwe-3D
I-NASA isanda kwethula umqondo omusha wendwangu yasemkhathini ehlakaniphile eyenzelwe ohambweni oluzokwenziwa yi-ejensi.
Ukungena lapho sizokhuluma khona ngephrojekthi evusa amadlingozi lapho ungathola khona ukwakha umshini wakho we-arcade ngokusebenzisa ukuphrinta kwe-3D.
Ibhodi entsha ye-Asus Tinker isivele iyathengiswa, ibhodi eliphindwe kabili ngamandla eRaspberry Pi 3 Model B futhi litholakala cishe ngama-euro angama-60.
U-Asepeyo wethula uhlelo locwaningo lwezokwelapha oluhlobene nokuphrinta kwe-3D
Inhlangano yezempilo i-Asepeyo isanda kwethula uhlelo olusha locwaningo ezibhedlela ezimbili zaseSpain ukuguqula ukuphrinta kwe-3D.
IPassivDom iyakwazi ukukhiqiza indlu ephrintiwe ngamahora ayi-8 nje
IPassivDom inkampani entsha ezinze e-Ukraine esanda kuba sematheni ezingeni laseYurophu ukuthi ikhonjiswe ngesikhathi ...
ISwansea University isibonisa ibhandeshi labo elihlakaniphile
Ngenxa yenhlanganisela yobuchwepheshe njengokuphrinta kwe-3D, abacwaningi abavela e-University of Swansea bakwazile ukwenza ibhandishi elihlakaniphile.
I-3Dfils yethula imicu emisha emithathu yokunyathelisa nge-3D
Ukungena lapho sizokhuluma khona ngemicu emisha emithathu esanda kwethulwa emakethe yinkampani yaseSpain i-3Dfils.
AbakwaBoeing balinganisela ukuthi bazokonga imali efinyelela ku- $ 3 million endizeni ngayinye eyenziwe ngenxa yokuphrinta kwe-3D
Ngokuya ngocwaningo kanye nokulinganisa okwenziwe yiBoeing, ngenxa yokuphrinta kwe-3D kwezingxenye ze-titanium bazokwazi ukunciphisa kakhulu izindleko zabo zokukhiqiza.
ISicnova Group ne-iGo3D bajoyina amabutho ukudala amafemu wokuphrinta we-3D
ISicnova Group imemezela isivumelwano sayo sokusebenzisana namaJalimane e-iGo3D ukuxhaphaza ngokokuhweba umqondo wemboni yokuphrinta ye-3D.
I-HP isivele isebenza esizukulwaneni esisha samaphrinta e-3D
Abaphathi be-HP baqinisekisa izinhloso zabo zokuqhubeka nokutshala imali ekwakhiweni nasekwakhiweni kwemikhiqizo emisha yokuphrinta kwe-3D.
I-CSIC izoqala ukusebenzisa i-3D bioprinter esithuthuke kakhulu namuhla
I-CSIC, iSpanish Higher Council for Scientific Research, isanda kumemezela ukuthi bakwazile ukufinyelela esivumelwaneni ne ...
I-Volt yase-Italy iveza isithuthuthu semidlalo ephrintiwe se-3D
Ukungena lapho sizokhuluma khona ngezithuthuthu ezintsha zikagesi ezenziwa ukuphrinta kwe-3D yinkampani yaseMilanese i-Volt yase-Milan.
Umdwebo 4, ipulatifomu entsha yokukhiqiza yokuphrinta ye-3D eyenziwe yi-3D Systems
Ukungena lapho sizokhuluma khona ukuthi i-3D Systems isivele yakha kanjani uhlelo olusha futhi olusabekayo lokuphrinta kwe-3D abalubize nge-Figure 4.
IMilshake3D, iphrinta ye-3D enezimfanelo ezizokumangaza
IMilshake3D yiphrojekthi yeKickstarter efuna ukukhiqiza ngobuningi iphrinta ye-3D eyenzelwe ngokukhethekile abadwebi nabadwebi.